Voina · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Novambra, 2012
Trinidad & Tobago: Rahona Mainty, Medaly Volamena
Karaiba 27 Novambra 2012
Nilona tao anatin'ny riaka mahery vaika sy tondradrano omaly maraina i Trinidad sy Tobago. Nihoatra ny moron'ny reniranon'i Diego Martin sy Maraval vokatry ny rivo-doza. Fa somary nihiratra kely ny sain'ny vahoaka tao amin'ny firenena - eny na dia fotoana monja fotsiny aza izany - satria nandrombaka ny medaly volamena io firenena io tamin'ny lalao Olympique ary faharoa izao teo amin'ny tantara izay isaorana manokana an'i Keshorn Walcott nohon'ny ezaka nataony teo amin'ny fanipazana lefona.
Hetsi-panoherana Tao Phulbari Hanoherana Ny Tetikasa Fitrandrahana Arintany Manao Tafo Lanitra
Azia Atsimo 26 Novambra 2012
Tao Phulbari, 350 km avaratra-atsinanan'i Dhaka renivohitr'i Bangladesh, tonga niaraka daholo ireo vondrom-piarahamonina samihafa mba hanandratra ny feon-dry zareo manohitra ilay tetikasa fitrandrahana arintany manao tafo lanitra. Ilay tetikasa, raha tafapetraka manontolo, dia haka tanàna maherin'ny 100000 ao anatin'ny faritra mirefy 59 Km² manodidina ary hamindràna toerana mponina an-jatony maro sy hisy fiantraikany maharitra eo amin'ny tontolo iainana
Fitorahana Bilaogy Ny Fahavoazana Taorian'ny Horohorontany tao Huitán, Goatemala
Amerika Latina 20 Novambra 2012
Ny bilaogin'ny Trano Famakiambokim-bahoaka Mi Nuevo Mundo (Ny tontoloko vaovao) avy amin'ny tanàna Huitán dia nizara sary ary nitatitra ny fahavoazana taorian'ilay horohorontany nanana maridrefy 7.4 izay nandona ny morontsiraka Pasifika Goatemala ny 07 Novambra 2012.
Afrika Mainty 14 Novambra 2012
Nanao hetsika fanentanana mitondra ny lohateny hoe "Fanoherana ny fitrandrahan’ireo orinasa vahiny ny harena an-kibon’ny tany" ny mpitoraka bilaogy Maoritaniana nandritry ny herinandro. Mizara amintsika ny lahatsoratra tanaty bilaogy sy ireo bitsika avy amin'io fanentanana io, izay mikendry ny anehoana ny voka-dratsy aterak'ireo orinasa ireo eo amin'ny sehatry ny toe-karena, tontolo iainana, maha-olombelona sy ny fahasalamana i Ahmed Ben Jedou.
Afrika Mainty 11 Novambra 2012
Matetika ny Tafika no nitana anjara toerana nampiova zavatra saingy manalasala teo amin'ny fiainana politika teto Afrika. tanelanelan'ny taona 1950 sy 2000, 53 ny firenena afrikana nizaka fanonganam-panjakana 85 izay tonga tamin'ny fiovan'ny fitondrana. Taorian'ny fiatoana kely nandritra ny taompolo 90, mbola fanta-daza tamin'ny fisiana fanonganam-panjakana be indrindra nandritra ny taompolon'ny taona 2000...
Fanairana tao Goatemala Taorian'ilay Horohorontany Maridrefy 7.4
Amerika Latina 11 Novambra 2012
Vaovao farany (7 Novambra 2012): Nanambara ny tati-baovao farany fa fara-fahakeliny olona 39 [es] no namoy ny ainy noho ny horohorontany izay namely an'i Goatemala androany vao maraimbe. Olona 155 hafa kosa no fantatra fa naratra. Avy hatrany dia nalaza tao amin'ny Twitter ny vaovao momba ny faharavana vokatry ny horohorontany maridrefy 7.4 izay namely...
Tontolo Arabo: Midika Fahatezeran’Andriamanitra Amin’i Amerika Tsy Tokam-po i Sandy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 05 Novambra 2012
Satria ao New York sy New Jersey avokoa ny mason’izao tontolo izao mba hanaraka ny vaovao momba ny tafio-drivotra Sandy, sy ny fahapotehana naterany, miadihevitra ny mponina maro manerana ny tontolo Arabo raha sazy noho ny fahatezeran’Andriamanitra no anton’ny tafio-drivotra – mba hamaizana ireo tsy tokam-po sy ho fanasaziana noho...
India: Mampanahy ny Fiparitaky ny Dengy ao Delhi
Azia Atsimo 03 Novambra 2012
Taitra ny mponina tamin'ny herinandro raha nahare fa matin'ny dengy ilay maintimolalin'ny fanatontosana sy famokarana ary fanoratana sarimihetsika ao India, Yash Chopra (80), ka mihanaka ny tahotra eny faritra sasany ao Delhi. Maharay antso maro avy amin'ireo marary ahiana ho tratran'ny dengy ireo mpitsabo, ary mitady tolo-kevitra ara-pitsaboana. Nahitana Fitomboan-trangan'aretina dengy tao Delhi ny nandritra ny volana lasa ary maro...